Ngaba unengxaki ngonxibelelwano kwi-iOS 9.3? | IPhone iindaba
UPablo Aparicio | | iOS 9, Izifundo kunye neencwadana
[QAPHELA]: Isiphene esithetha ngale post sasonjululwa nge Ukukhululwa kwe-iOS 9.3.1. Apha ngezantsi unayo yonke inqaku.
NgoMvulo we-21, kungekudala emva kokwazisa i-iPhone SE kunye ne-9.7-intshi ye-iPad Pro, iApple isungule iOS 9.3. Njengakulo lonke usungulo, asonelisekanga ngokulinganayo, kodwa kule meko asinakuthetha ngengxaki encinci, njengokuncipha kokuzimela. IOS 9.3 yeza ne-bug ebonakala ixhaphake kakhulu kuthintela ukuvula amakhonkco athile kwezinye izicelo. I-Apple ayikaluthumeli ulwazi lokungaphumeleli, kodwa kuya kufuneka ufunde iikhomenti zabafundi beendaba ze-iPhone News ukuze uqonde ukuba ingxaki ikhona.
Kucace gca ukuba iyacaphukisa. Ukungabinakho ukuvula amakhonkco kwi-smartphone kwenza ukuba isixhobo singathandeki kwaye kulindeleke ukuba inkampani yaseCupertino ihambe kwaye ilungise ingxaki kwakamsinya (ngoLwesibini?), Into abanokuthi bayisombulule ngaphandle kokumilisela uhlobo olutsha lwe-iOS . Kude kufike ixesha, sinako zama izisombululo ezahlukeneyo ukuba, nangona kuyinyani ukuba baya kunciphisa amava omsebenzisi kancinci, kuyinyani ukuba inokuvumela abo bachatshazelwe yile ngxaki ikhathazayo ukuba basebenzise isixhobo "ngesiqhelo".
1 Uyilungisa njani indawo yokuqhagamshela kwi-9.3
1.1 Khubaza iiNgcebiso zeSafari
1.2 Sula imbali kunye nedatha yewebhusayithi
Uyilungisa njani indawo yokuqhagamshela kwi-9.3
Kwizisombululo esiza kuzinika namhlanje, unokukhetha esinye okanye ezingaphezulu. Kungcono ukuzama enye yazo kwaye ubone ukuba yonke into iyasebenza "ngesiqhelo". Ukuba akunjalo, zama esinye isisombululo. Siza kuxoxa ukuya kuthi ga kwiindlela ezi-3, kodwa kungcono ukuzama ukukhubaza kancinci kangangoko.
Khubaza iiNgcebiso zeSafari
Esi sisombululo sisebenze kutsha nje xa bekungenakwenzeka ukuhamba kwi-Safari, into eyalungiswa ngu-Apple ngaphandle kokukhupha uhlobo olutsha lwe-iOS. Siya kubakhubaza ngokwenza oku kulandelayo:
Ngaphakathi kweSafari, sicime iiNgcebiso ngeSafari
Sula imbali kunye nedatha yewebhusayithi
Njengakwisisombululo esidlulileyo, singena kwi-Safari.
Sicofa umlando ocacileyo kunye nedatha yewebhusayithi.
Kwaye okokugqibela, samkela ngokuthepha kwiCacisa imbali kunye nedatha.
Kungenzeka njani ukuba kungenjalo, masiye eSafari.
Sityibilika phantsi kwaye sibambe phambili.
Ngaba ikusebenzele? Unganqikazi ukushiya amava akho kwizimvo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 9 » Ngaba unengxaki ngonxibelelwano kwi-iOS 9.3? Zama ezi zisombululo
ukuba iyasebenza 🙂
Kum kumakhonkco akwi-imeyile yam, akukho nto ingahambiyo ... Ndiyathemba ukuba isonjululwe kwaye ndilindele iindaba zakho njengesiqhelo!
Ndine mini ipad. Amakhonkco awasebenzi kum okoko ndihlaziyileyo. Kwaye kwi-imeyile yam, ukuba ndizama ukuyivula, iyaxhoma kwaye kufuneka uvale yonke into ukuze ubuyele kwimiyalezo.
Ndizamile zonke iingcebiso ezinikiweyo kwaye akukho namnye kuzo osebenzayo.
Yinkathazo leyo ndiyathemba ukuba iza kusonjululwa kwakamsinya.
Isebenze kum ngokucinywa kwesikripthi seJava
Isebenzile, enkosi !!!!! NgoLwesibini kunye nokuhlaziya ingxaki kuyaqhubeka. Buza; Ngaba kufuneka sigcine iSafari kunye neeJava Iingcebiso zikhubazekile?
UDaniyeli p sitsho
Molo, ndenze utshintsho olucetyisiweyo kwaye luyasebenza njengangaphambili.
UNowa Torres sitsho
Iyasebenza, bendisele ndirhalela! Enkosi.
Phendula uNoé Torres
LIDA ukuhambelana namazwi sitsho
UKUSUSELA UKUHLAZIYWA KOKUGQIBELA I-WHATSAPP IYAQHUBEKA, UKUZE NDIBE NOKUPHUMA KWI-CHAT YONKE KUFUNEKA NDIVALE ISICELO…. NDISELE NDINOKUDELELWA, ANDIZI UKUBA NDENZENI
UCoco Suarez sitsho
Isohlwayo? Into efana nokubabetha esidlangalaleni bade baguquke ezonweni zabo ... Hahaha
Phendula kuCoco Suarez
Kwi-imeyile, amanqaku, iMiyalezo, WhatsApp, xa uzama ukukopa ikhonkco, iyaphazamiseka.
Ukukhangela kuGoogle ndisebenzisa iGoogle APP, iziphumo ziyasebenza.
Unjani! Ndineengxaki ngeSafari kunye neYandex, ngokubanzi ndiye ndabona iingxaki zokulayisha idatha kuzo zonke izicelo, kwaye ingxaki ayisiyi-wifi yasekhaya, yi-iPhone.?
Ewe, hayi, akukho nanye kwezi zinto zintathu zisebenzeleyo. Xa ndinika ikhonkco ijinga kum !! Ngapha koko, ndiyathemba ukuba iApple iyisombulula le ngokukhawuleza okanye ukuba ngokuchaseneyo usenayo enye indlela yokuzama esinye isisombululo.
UAlfonso R. sitsho
I-Pufff, kukuba le iOS sele iza kuya kwi-piss kwaye ingathathi iqabane, yinto enye emva kwenye, kubonakala ngathi ayinasiphelo. Kwaye emva koko abantu bathetha ngezinye iinkqubo, kodwa ukuba i-iOS ayisosisithunzi sento eyayenzelwe uThixo! Kwenye ukuba ixesha alitshintshanga ngokuzenzekelayo notshintsho lwexesha (ebangele ukuba izigidi zabantu zifike mva emsebenzini), kwenye ukuba ibhetri ikhutshwe ngokukhawuleza okukhulu kunesiqhelo, yongeza uhambe ngoku ngoku kudala ilindelwe iOS 9.3.
Ukuba i-Apple ayikhange igwebe kuyo? ... Ewe, njengesiqhelo, ngoku isiphoso siya kuba nabasebenzisi kuba abayazi indlela yokubeka okanye ukucofa ikhonkco, njengaxa iAntenaGate leyo ngokweApple yenzekile kuba abasebenzisi bayenzile Andazi ukuba ungayithatha njani ifowuni, mama wothando mhle, yeka ihlazo, yintoni eyoyikisayo.
Ngaphambili, xa wawuthenge i-iPhone kwaye uhlawule into oyihlawuleleyo ifowuni, uyenze ngenxa yokungaphumeleli kwayo, kuba yonke into oyenzileyo, uyenze kakuhle kakhulu, kuba ayinazo iimpazamo ezenziwa zezinye iinkqubo. Okwethutyana ngoku, konke oku kuye kwanyamalala kwaye i-iPhone iyasilela okanye isilele ngokufanayo okanye ngaphezulu kwezinye iinkqubo, ke kusengqiqweni ngoku ukuhlawula ixabiso le-iPhone xa ineengxaki ezifanayo, okanye ngaphezulu, kunezinye iinkqubo, i-Hardware isezantsi ngokungenasiphelo nangaphezulu, ngaba bayasusa unxibelelwano lwendalo iphela ukushiya eyabo? Ewe ndonwabile ngakumbi nangakumbi ekubeni nditshintshele kumda we-S7. Kwaye ulumke! Andonwabanga ngoluhlobo lweendaba ezicace gca; Ndiyathemba nje ukuba ezi zinto zivusa abantu, ukuba basabele kwaye ngayo benza ukuba iApple isabele kwaye ibuyisele i-iPhone kwinto eyayiyiyo, eyona nkqubo ihamba phambili emhlabeni.
Mhlawumbi oku kuyakuqinisekisa ukuba amagama aphambili alandelayo akabonakaliswa njengeyona nto intsha, njengotshintsho lwehlabathi imitya embalwa elula ye-nylon yewatchwatch yakho, yile nto yenzekileyo kwinqaku lokugqibela, ngokoluvo lwam ngumbono ohlekisayo kunye neentloni.
Phendula kuAlfonso R.
Ewe, ndinayo le ngxaki ukusukela oko ndathenga ifowuni ngoJanuwari 6s plus, kwaye ndisenayo, nge-iOS 9.2 emva kweefowuni ezininzi kunye nokuCwangcisa njengentsha kunye ne-ID entsha ye-Apple, bayitshintshile ifowuni kwaye siyaqhubeka, ke Into endiyibonayo xa uhlaziyo lwenzeka kubantu abaninzi, ndihlala ndilindile, ewe ndidanile ngokupheleleyo, ifowuni engenamsebenzi kum, sifana nephepha elinobunzima, alivuli naziphi na amakhonkco, kuphela ngezicelo ezithile,
Ndilibele ukukhankanya ukuba le ngxaki nge-iOS 9.3, besirhuqe abantu abaninzi nge-iOS 9.2 ukusukela ngoJanuwari ngaphezulu okanye ngaphantsi, kwaye siyaqhubeka ngaphandle kwesiphumo
UJose Manuel Puig M. sitsho
Iingelosi ndiza kungena kule foram ndikubulise, nantsi umsebenzisi we-iFowuni 4s uthetha nawe malunga nezo uTim Cook wazisungula ngo-2011 ngo-Okthobha ndiyakholelwa kunye no-Os 5 kunye neentsuku kamva ukuba uGenius kaSteve Jobs afe, Ndinesi sigxina ukusukela ngoMeyi 2015 kwaye ndothuswa luhlaziyo lwayo kuba ndicinga ukuba sisiphelo (Umnxeba) esinokufumana uhlaziyo oluninzi kwaye eso sisisindo kunye nesizathu sexabiso, nangona kunjalo ndifuna ukukuxelela ukuba ndicinga ukuba ngoku ibe ngamaxesha eGiant Microsoft, kunye neLumia yayo kunye nenkqubo yayo yeWindows 8.1 Blue kunye nohlaziyo kuWndows 10 uyeza, esele amanye amaqela kuluhlu sele eyizisile .. Zama iMicrosoft Lumia, ngokuqinisekileyo awuyi kuzisola. . Ndinesiphelo esisezantsi seLumia 520 kwaye bekumnandi, isixhobo sam esilandelayo asizukubiza iFowuni, kodwa i-640-intshi ye-Lumia 5.7 Xl eza ne-Windows 8.1 Demin.
Phendula kuJosé Manuel Puig M
Molo, uJosé Manuel. Andizukubheja ngaloo nto. Namhlanje babambe umsitho kwaye khange bathethe ngeFowuni yeWindows ... Kuvakala ukuba bazokuwubeka ecaleni.
Yonke into oyithethayo iyinyani, ndiyabazi abantu esele banayo ixesha elide, nditsho ne-iPhone6, ngenxa yoko andihlaziyi okanye ndiyaphambana kwi-IOS 9.3.
Ngu tf nasevenkileni amagama amnandi kakhulu kodwa kwinto oyibonayo abakasombululi nantoni kwaye inyani iyazibona izibonelelo ze tfs. Abahlobo, ndicinga ukuba kwesona siganeko sincinci ndiyatshintsha kwaye ndiyaxolisa kuba bendikunye neApple ixesha elide kodwa ndiyabona ukuba ilahle umhlaba omninzi
sukuhlaziya. ufuna ukubenza nzima ubomi bakho. Ufuna ntoni ios 9.3? ukuba unee-idevices kwaye iyasebenza, sukuhlaziya !!! Musa ukubenza nzima ubomi bakho. yintoni oyinika iis iis 9.3 ongasenayo? Umsebenzi wasebusuku? Yiyiphi inkunzi. kuba ibiyingxaki ye-rl iminyaka, ukubeka i-bullshit engenangqondo kwaye engenamsebenzi yantoni? Ukumamela izixhobo ezi-4 ezingenangqondo ezibuza "uguquko"? Thatha i-geroma, ukusukela nge-ios 7 abangakhange bayibethe ibhola, uhlaziyo ngalunye lube lubi kunolunye. Olona hlobo kuphela lwe-idevice yakho yokusebenza ngokugqibeleleyo kwaye ngaphandle kweengxaki kukuyigcina kunye ne-ios yoqobo eza nayo. Iphone 6s kunye ne-ipad mini ene-ios yoqobo kunye ne-4 ebalulekileyo yokuqhekeka kwejele kunye ne-voila, i-pepinacos evela kwi-idevices. Kwaye andiva kuhlaziywa ebomini, akukho nanye kwi-bullshit engenamsebenzi ye-ios entsha eyimfuneko kum. Ukuba ufuna ukonwaba, SUKUHLAZIYA !!
Phendula kwi-ios 5 unaphakade
Akukho nto, amakhonkco awasebenzi kwezinye ii -apps ... Nditsho nokuqalisa kwakhona okanye ukuqala kwakhona nge-iTunes, emva kwexesha ibuyile. "Ibhotile"; Kubonakala ngathi iApple ithi izakuyilungisa kungekudala:
Le ayisiyongxaki nge-IOS 9.3, besele ndinengxaki nenguqulelo yangaphambili, kuye kwafuneka ndiyiqale ngokutsha i-iPhone njengenye entsha kwaye iyasebenza, ke xa bakhupha i-iOS 9.3 bayayihlaziya kwaye isebenza ngokugqibeleleyo kude kube lixesha elidlulileyo ukuba iphinde yasilela kum kwakhona.
Ngokuchanekileyo, ayongxaki nge-ios9.3, sele ivela ngasemva, isaqhubeka nayo, isonjululwa okomzuzwana, kodwa emva kweentsuku ezimbalwa iyabuya, ngoku kubonakala ngathi bayandisile ngohlaziyo, kuba jonga ubuncinci ukuze ube ngabantu abaninzi, ukuba bayayilungisa, kuba ndingazama into oyifunayo, ayiyisombululi, emva kweentsuku ezimbalwa kuxhomekeke ekusetyenzisweni, impazamo iyabuya
Andazi ukuba ichaphazela iimodeli ezithile kuphela, andinangxaki kwi-iPad, ikwi-6s kuphela kunye
Ndinengxaki kule iphone 6 ine-ios 9.3 kunye ne-mini ipad ene-ios 9.2
Uninzi lwe-betas kwi-fart yokulujija ngoluhlobo, iApple ayiseyiyo le nto ibiyiyo ...
Ndiyabulela kakhulu kwiingcebiso ezindisombulule ngalo mzuzu. Ngoku ndiyathemba ukuba banokusombulula yonke into ngokukhawuleza.
Ndinengxaki efanayo kwi-iPhone 6 128GB, ndiyirhuqa kwi-9.2.1, ayivuli izixhumanisi ezivela kwi-app, i-imeyile okanye ukukhangela kwe-safari. Ukuba ubuyisela njengokutsha kubonakala ngathi kuyasebenza, kodwa kufanelekile ukuba uphulukane nazo zonke iisetingi, iifoto, kunye nokuphinda ujonge zonke izicelo ukuze njengoko zisitsho, iphinde isilele kwakhona. Ndizamile ukubuyisela ikopi ze-itunes, icloud kwaye akukho ziphumo. Ukuba uyenza isebenze iJava, isebenza kuphela amakhonkco, kodwa amaphepha afuna iJava, ayisebenzi ngokufanelekileyo.Ngaba ikhona enye indlela eya kwi-Itunes apho ungabuyisela khona usetyenziso olifunayo? Mholweni, kwaye enkosi kakhulu
Ukuya kuseto, kwaye ukutshintsha i-injini yokukhangela kusonjululwe ... ayizukusebenza neGoogle okanye i-Yahoo ... nge-Bing iyasebenza ....
Ndinengxaki kule iOS 9.2 emva kokufaka i-adblock. Ndithethile noApple nasemva kokufaka kwakhona i-iOS kwakhona bendinengxaki ndaye ndaqala ukukhupha izicelo ndide ndifumanise ukuba ingxaki ivela kwi-block blocker. Emva kokususa iapp, yonke into igqibelele
Ewe, nge-iphone 4s, ipad 3 kunye ne-ipad 4, iingxaki zero. Ekuphela kwento endiyibonayo kukuba ibhetri ihlala ngaphantsi kwe-9.2.
Phendula ku juanca
Isebenze kakuhle kum ngohlobo 9.2, ngequbuliso amakhonkco aqale ukusebenza, ndahlaziya ku-9.3 kwaye ngokufanayo kunye nezikhombisi zakho, ubuncinci ungasebenzisa into ebhetele. iingxaki
Oku kulihlazo, iifowuni eziphathwayo zixabisa imali eninzi ukunika ezi ntlobo zeengxaki, kufuneka sonke sikhalaze, ndithumele ii-imeyile ezimbalwa kule dilesi.
Ndizenze zonke iinguqu ezi-3 kwi-iphone 6 yam kwaye iyasebenza. Enkosi ngengcebiso yakho.
ULorraine Rojas sitsho
Akukho nanye kwezi zinto zintathu zikhethiweyo ezisebenze kwifowuni yam
Phendula uLorena Rojas
ULuis Echavarría sitsho
Ukwenza kungasebenzi ijava kundincedile ekusebenziseni amakhonkco ophendlo, kodwa andikwazi ukuvula amakhonkco afika kwiposi yam, iyacaphukisa, kuba ndisebenzisa iindaba zikaGoogle kwaye andiboni ukuba bandithumela ntoni kule ndawo.
Phendula uLuis Echavarría
Kwenzeka into efanayo kum ... umba weJava wasonjululwa kwi-safari, kodwa amakhonkco avela kwezinye izicelo awalayishi nantoni na, xa ndivula iphepha X tpc ndingacofa naliphi na icandelo lephepha livule nje kwaye nali.
NguDavide Gutierrez sitsho
Isebenzile kum kodwa ukulungiswa akukho nto ngeposi
Phendula Ing david gutierrez
Ngethamsanqa ndiyifunde yonke le nto .. .. bendizakubuyisela yonke into ephathekayo, AKUKHO KUKHONA KUHAMBA, KUYITRAVA, KUHLALE KUCINGWA… .. USteve ubuyile X UTHIXO !!!!!!!!
Hayi indlela elizothe ngayo iApple ngohlaziyo lwayo ngoku andinakusebenzisa i-iPhone csmr yam coleraaaaaa kwaye ndiyisebenzisa ukukhangela amakhonkco, ukuthumela ii-imeyile njlnjl.
Ayisebenzi de iApple ikhuphe uhlaziyo kule mpazamo… .. I-zero ye-iOS 9.3
Into yeJava iyasebenza kodwa ngale ndlela, ikaka enkulu ngo-9.3 ndiyathemba ukuba izakusombululwa kungekudala
UDaniel R sitsho
Akukho nto ayikasebenzi ukuba ndikwazi ukuvula kufuneka ndibambe kwaye ndivule kwithebhu entsha emva koko ndikhangele i-tab entsha kwaye ke iyavula.
Phendula kuDaniel R
Molo, ndibuhlungu kakhulu ngawe, kodwa kwelinye icala ndonwabile nge-gaffe ene-ios 9.3, ukubona ukuba ngaba ekugqibeleni bayayilungisa na, kuthi abo banengxaki yeenyanga ezi-3 ngoku uthe kungekudala, iApple ayicingi ukuba ndiza kuphinda ndiphinde kwakhona, ndiyathemba ukuba bayayilungisa
Obu buxoki, i-bug iqhubekile ngaphezulu kweenyanga ezi-2 okoko yaqala kum, iqale ngo-9.2.1 emva kokuxazulula ibug eyayivalwa yi-safari xa ucofa ibha yedilesi, i-bug ithatha ixesha elide kwaye bayayisusa ngoku kuba idlulise abantu abaninzi kodwa ayilotyala le-9.3, enyanisweni inokusonjululwa ilula kodwa kufuneka sincame izicelo esinazo ngokubuyisela njenge "IPHONE ENTSHA" nokucima ikopi ye-icloud dspues Ukufumana kwakhona idatha kwiakhawunti icloud amanqaku, abafowunelwa, iifoto, njl ... iinyanga kunye negcisa elivela eIreland linxibelelane nam kwaye isisombululo ekuphela kwento endinayo.thumela, ithamsanqa kunye nemibuliso
Ewe, khange ndiyisombulule, bayitshintshile ifowuni yam yonke into entsha, nge-id entsha, ndilahlekelwe yiyo yonke into, kwaye emva kweentsuku ezi-5 ngokufanayo, ndiye ndaphantse ndaneenyanga ezintathu (i-1000 yeefowuni ifowuni)
Isebenzile, kodwa kukho amakhonkco ngaphakathi kumaphepha angavuli. Kubuhlungu ukuba andazi ngesitatimende esisemthethweni sika-Apple.
Akukho nto indisebenzeleyo. Ukusukela uhlaziyo andikwazi ukufikelela nakwezinye amakhonkco. Zonke ezinye ii -apps ziyasebenza.
Ewe, ekungekho nanye kwezi ekusebenzeleyo, zama i-safari ngokucinezela ibhokisi esembindini (leyo ikuthumela kwezinye izicelo) ukuvula i "Cela iwebhusayithi epheleleyo", ukuze ujonge iwebhu kwi-pc ... Iyasebenza
Uxolo uCarlos, andiqondi, ungaphinda le ngcaciso?
Isikhephe sam sitsho
Ndiwenzile la manyathelo mathathu ngoku i-Safari iyasebenza, kodwa i-imeyile ayikho yokuthetha isavaliwe!
Phendula kwinqanawa yam
Kwi-Safari xa uzulazula kwimenyu esezantsi kukho ibhokisi enentolo ephezulu, le isetyenziselwa ukwaba upapasho nge-imeyile, i-whastapp njl.njl. Iscreen sikamabonwakude esibonisa ukuba "Cela iwebhusayithi iphelele", kwaye ikubonisa ugoogle ngokungathi ukwi-pc.
Ayisebenzi kum. Yonke into ivaliwe, umbuzo omnye: ngaba i-9.2.1 isenokufakwa?
NGUJUAN ANTONIO sitsho
Phendula JUAN ANTONIO
Ndinengxaki kwi-iPhone 6s, ibisele isenzeka kum nge-iOS 9.2 kodwa xa uhlaziya ukuya kwi-9.3 iye yaba mbi, ayivuli naliphi na ikhonkco kwaye ngaphezulu kwi-Safari ivaliwe, into engazange yenzeke kum kwaye andikhange ndilindele ukuba yenzeke kum ayizange ibe
Yenzekile kum njengawe Sirayeli kodwa andenzanga nto mna
Namhlanje ndide ndavimba imeyile yam xa kukhethwa ikhonkco kwi-mini mini ye-iPad.
Kwafuneka ndiqalise kwakhona.
Ewe, iJavacript iyasebenza kodwa iposi iyavalwa xa usiya kuyo nayiphi na ikhonkco
Isebenze eSafari kodwa hayi ngeposi.
Lihlazo eli. Ndiphakamele umnqwazi weapile. Ndine-iPad ene-ios 9.2.1 kwaye kwenzeka into efanayo kum. Kwakhona, ngamanye amaxesha iSafari okanye imeyile yam iyathintelwa. Kwaye akukho mntu uvela kwinkampani onika nayiphi na ingcaciso. Itotali, apha njengezidenge zokulinda ... Kwaye ngelixa, ngubani ofuna ukusebenza emva koko yiGARLIC kunye NAMANZI.
Amakhonkco asebenza eSafari, kodwa AKAVULI amakhonkco ee-imeyile, nangaphezulu, ibhloka ii-imeyile
Okokuqala, yithi kule post ukuba kule nto uyibonayo ingxaki ayiveli kwi-IOS 9.3, ivela kwakudala kwaye ngoku iyenziwa ngokubanzi. Ke isihloko asifanelekanga, kuyacaca ukuba kukho ingxaki enkulu. Kwenzeke kum ngale ntsasa kwaye andizange ndihlaziye nantoni na.
Ndibhale izolo ndathi ndiyabazi abantu abahlupheke iinyanga kwaye »balwa» bodwa ngoku sibaninzi kwaye abo bazakushiya, kuzofuneka benze into bayisombulule kwaoko
Ndivuma ngokupheleleyo, ingxaki ayisiyo i-ios 9.3, eli Phepha linokulungisa INGXELO kunye ne-ECHO ingxaki enkulu esele yenzekile ixesha elide kwaye kule uyibonayo, ngoku iyenzeka ngaphandle kwenkqubo onayo, ndiyazi Umntu omnye one-ios 9.2 othanda iiNgelosi, iqale ngale ntsasa kunye neApple NGAPHANDLE KWENKQUBO
Molo, Angeles Nieves: Ngaba uyabhala kwaye uphendule ngomnye uNick? Uza kuzijonga njani izikhalazo zakho ukuba ufuna sikholelwe ukuba ningabantu ababini abohlukeneyo abakhalaza ngento enye?
Hayi Pablo, singabantu ababini, nje
Iingelosi ndisebenzisa ifowuni yam, khange ndiyiqonde, ndiyaxolisa,
Molo Pablo, ndingu-Angeles kwaye ndisebenzise inombolo yefowuni yeNieves kwindawo yokutyela kuba bendingenayo eyam, kodwa ndibeka ulwazi lwam (igama kunye ne-imeyile) .Ingxaki yam yefowuni iqale ngale ntsasa kwaye ngoku ine-IPad Umoya.
Ndinefowuni yokuqeshwa ngomso ngo-11 ekuseni kunye nenkonzo ye-Apple. Nangona andicingi ukuba izakusombulula nantoni na kum ngokubona yonke into eyenziwa yiNeves kunye nabanye abantu ngaphandle kokulahleka kwedatha.
Uxolo ukuniphazamisa okanye ukuphakamisa "ukukrokrela" ingxaki inkulu, ndine iphon6 kunye nexesha elide eApple. Ayizonjongo zam ukukhathaza okanye ukukhohlisa, kuphela ukunxibelelana nengxaki yam kuba ndicinga ukuba ukuba baninzi kuthi bayakuba nomdla wokunika impendulo kwaye bafumane isisombululo
Kubonakala kum ukuba uphawu olunje, oluthengisa iimveliso ezibiza kakhulu, kufuneka lujonge lonke uhlaziyo ngaphambi kokulu khupha. Okona kubi kuko konke kukuba akukho mntu uzikhuphileyo ukuba achaze ukusilela kwaye ichaphazela abantu abaninzi. Inkampani enjalo kufuneka inyamekele abathengi bayo.
Ndiyathemba ukuyilungisa kungekudala.
UEnrique Aponte sitsho
Ingxaki ayikho nge-iOS 9.3, ndisenayo i-iOS 9.2.1 kwaye iqale ukwenzeka kum izolo ... kwaye ndinefowuni iinyanga ezimbini. Ke ingxaki ibaluleke kakhulu kunale bafuna ukuba siyibone!
Phendula u-Enrique Aponte
ISanti Costa sitsho
Ukugqibelela. Ewe iyasebenza. Ndiyabulela kakhulu
Phendula u Santi Costa
Masibone ukuba bayayisombulula kungekudala.
Iindaba IPhone indithumelele i-imeyile ukuqinisekisa ubhaliso, kodwa andinakuyenza kuba ukuzama uku »qinisekisa ukuqhubeka» akusebenzi kwaye kuvaliwe.
umntu wohlanga lwaphesheya osoloko ehambahamba sitsho
UCarlos Tarabochia sitsho
Enkosi kwiwaka. Ndavula emva kokususa iJava. Ndicinga ukuba iapile iyaphamba !!!
Phendula i-carlos tarabochia
Ngelishwa ,,, ndizisola kangakanani ngokwenzekile kwilizwe le-Apple ... ngamava am okuqala, ndathenga i-iPad Air 2 yepaston kunye nohlaziyo lokuqala zaaaaaas. Ukungasebenzi ngokupheleleyo kwe-Safari, chrome, firefox ... yintlekele. Siyavuyisana nani manenekazi ka-Apple ... njengoko imisebenzi emihle yakudala yaphakamisa intloko ...
I-iPhone 6plus yam ayisebenzi kukuthinta isikrini kuba ndihlaziya i-iOS 9.3 iyandikhathaza
Ndinomoya we-ipad nge-9.2.1 kwaye yaqala ukwenzeka emva kwemini ngeCawa.
Pablo, ndicinga ngentlonipho yonke ukuba isihloko asichanekanga kuba singekho nge-9.3 kwaye okwangoku akukho sisombululo, into evezwe apha ngeyona nto intle zii "ñapas" ezingalungisi nto.
Ndiyacamngca ngento eyenzekayo neApple. Into oyithethayo yinyani, ezi ngxaki azikho ukusukela ngoku, besizirhuqa ixesha elide kodwa ngenxa yazo naziphi na izizathu isehlo siyanda ngokungathi sisifo esikhulu.
Ndicinga ukuba xa kuthathelwa ingqalelo ubukhulu balo mba uwuthathayo, kungakuhle ukuba uxele kumbutho ofana notshintsho.org, akukho sithintelo singcono sokulwa iintsholongwane kunokuba sihlasele apho sibuhlungu kakhulu, kule meko, ukunganyaniseki uphawu.
Amagqabantshintshi nje (ke awundibizi kakhulu)
Namhlanje ngo-11 ndithethile no-Apple Technician wandinika isisombululo sokubeka i-Bing njengenjini yokukhangela. Ndamxelela ukuba ayizukuba sisisombululo kwaye lixesha lokuba bathethe into sele bebaninzi kuthi esele benengxaki. Ndiza kuphinda nditsalele umnxeba kunye nenombolo yesiganeko sam ukuqinisekisa ukuba ndisenguye.
ENKOSI KAKHULU, isonjululwe, ayikwazanga ukuvula amakhonkco kwenjini yokukhangela
Enkosi ngenqaku lakho
USebastian gottschalk sitsho
Kwafuneka ndenze zonke izinto ezi-3 kwaye ngoku ziyasebenza. I-shit yokuba ifowuni ephezulu isebenza ngolu hlobo!
Phendula uSebastian Gottschalk
Ewe ... sisiqabu ubuncinci, ukufumana iiforum apho kuthethwa into efanayo naleyo yenzekayo kuwe ... ukuziva uhamba nayo kubonakala ngathi kuyayenza ingxaki ingaphantsi ... ... kodwa ayisiyiyo kwaphela ... ... ezi mpazamo zenza ukuba kube nzima umsebenzi ... kwaye okona kubi kakhulu, kukubona ukuba ekuphela kwento oyifumanayo zizikhalazo hayi isisombululo sokwenyani ... ..Ndingumntu othanda iapile ixesha ... kwaye ndiza kukunika umda wokunyamezela / ukuzithemba ..... ndiyathemba ukuba isonjululwe ngokukhawuleza !!!
Nam, okoko ios09 yokugqibela yahlaziywa, yacetyiswa yi-apile ukuphucula inkonzo yayo, andinakho ukuhamba ngapha kweengcebiso zokukhangela nge-safari ... Ndibonelele ngeendlela zokufumana isisombululo kule oagina kwaye ndingahamba ngokuyekisa iJava
Ndiyathemba ukuba iapile iyazisombulula ezi ngxaki ,,, akukho ngqiqweni ukuba khange bayizame imveliso kwinto esisiseko ... le ngxaki ivelile kule veki.
Iincwadi azisebenzi, ivala usetyenziso ngokwalo: /
Ewe kuyasebenza kodwa kusenziwa amanyathelo ama-3.
Akukho nto indisebenzeleyo. Ukusuka kwiWathsapp kunye neMeyile, khange ndiyisombulule, kodwa isikhangeli sinayo. Ndiyifakile iDolphin kwaye ilungile.
Emva kweminyaka emininzi engenamiqathango… iiMac, iiappel tv, izikrini, iPhones….
Ndidiniwe kukungakhathali okuninzi kwinxalenye yeapile, ndiqala ukungasiboni isizathu sendleko ephezulu.
Esona Sombululo SISONA SONKE SOMNTU OCHAPHAZELEKILEYO KUKUBUYA KWI-IOS 9.2.1 KUTHENI UKUBA UVUMELA AMA-ITUNES AYENZE. OKUPHELA KUKWENZA INKQUBO YOKWENZA ISIPHAKAMISO SEFOTO, I-AGENDA, I-WHATSAPP ... NGENXA YOKUBA IKOPI YOKUQALA ayiyi kuhambelana nenkqubo ephantsi. IINGCEBISO BONKE BONKE: NGOKUQHELEKILEYO ISIBINI SEENYANGA ZIHAMBE NGAPHAMBI KOKUHLAZIYA NANINZI, NGENXA YOKUBA AWUTHI UTHENGE UQHAKA NJENGOKO NGOKU. AMAXESHA AMANINZI NGOKUTSHA OKANYE OKUTSHA AKUYONA BEST. NGOKUPHATHELELEYO
Ndisenayo i-9.2.1, ungaze uhlaziye i-9.3 kwaye ukusukela ngeCawa kwenzeka into efanayo kum. Oku kubonisa ukuba ayisiyongxaki nje evela kuhlaziyo lwamva nje.
Ayinamsebenzi ukuba uhlaziya okanye awuhlaziyi ... bendine-ios9.2.1 kwaye andivulanga maphepha okanye nantoni na ndayihlaziya kwimeko enjalo kwaye ihlala injalo.
Andikwazi kungena kulo naliphi na iphepha le-intanethi ... ndizamile yonke into kwaye akukho nto isebenza ...
Ndenze yonke into abayithethileyo akhonto ndino iPhone 6plus akhonto isebenza
Isebenzile kum !!
IMISEBENZI YASIII 🙂 NGAPHANTSI KOKUBI, NDANDISELE NDICINGA UKUBA NDONAKALISWE… KUNYE NEZIPHUMO… .. !!!! NDIBULELA KAKHULU!
Kwenzeka into efanayo kum ukusukela ngoMgqibelo ebusuku xa ndandikhuphela i-Ios 9.3 ukusuka kuloo mzuzu kwi-iPhone 6S nakwi-ipad emoyeni, andikwazi ukuvula naziphi na amakhonkco. Ndibize umnxeba ngenkxaso yezobuchwephesha ka-Apple kabini kwaye bandixelela ukuba abanalo nofifi lokuba kwenzeka ntoni kwaye bakhubaze iJava ukubona ukuba iyasebenza na, kodwa ayisosisombululo kwifowuni yeli xabiso ....
Into yeJava ukuba iyasebenza. Iintloni zokuba umgangatho wenkonzo ye-iPhone uyehla njani
Kuyamangalisa., Ndizama ukwenza i-tweetbot kwaye ayiyivuleli ikhonkco yokuqinisekisa iithokheni nokuba zeziphi.
Kulungile, ndicinga ukuba ingxaki yeyam, isiqabu esikhulu esele sisebenza kwi-100
M. Moreno sitsho
Kwafuneka ndenze uhlengahlengiso oluthathu olucebisayo. Isebenze ekugqibeleni. Ukulunga! Ndiyabulela kakhulu.
Phendula uM. Moreno
Ayisebenzi kum into enokwenziwa kwimeko enjalo, abazi ukuba uhlaziyo olutsha luya kuba nini ukuphucula ukungonwabi kwiqela.
Enkosi ngamanyathelo !! Bendilangazelela, emva kokwenza utshintsho, ukucima kunye nokuqala i-iPhone isebenza ngesiqhelo!
Andiqondi ukuba iApple ayisiniki sisombululo kwangoko!
IManuel Caldera Lab Proden sitsho
ugqibelele, enkosi kakhulu
Phendula Manuel Caldera Lab Proden
Ndiyabulela kakhulu! Bendizakuphambana, bendingayi ku safari kwaye bendicinga ukuba umnxeba wam sele wophukile (ngenxa yam) Option 1 and 2 besele ndizamile ngokwam, kodwa ukuba khange ndifunde u-3 ibizokuhlala igreyithi .
Khange isebenze kum !! Ndizamile zonke ezi-3 emva koko ndaphinda ndaziqala kwakhona kwaye ziyafana 🙁
UNorberto Tussinger sitsho
Ndizamile zonke iindlela ezi-3 kwaye ayisebenzi nakweyiphi na kwi-iPhone. Yonke into isebenza kakuhle kwi-iPad Air ngaphandle kohlengahlengiso.
Phendula uNorberto Tussinger
NCEDA !!, Ndine-iPhone6 ​​kunye nohlaziyo kwi-iOS 9.3 nangona kunjalo ingxaki ebindinike yona bekuku-Wifi, ngoku ifowuni yam ayisandivumeli ukuba ndivule i-wifi, ukhetho luvela kwithoni emnyama engwevu kwaye ayisebenzi . Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba yingxaki yesoftware yokuhlaziya? kuba ngaphambi kokuba isebenze ngokugqibeleleyo. Into endinika ukuthandabuza kukuba ndizamile ukwehla kwi-iOS 9.2.1 kwaye bendinengxaki efanayo. Amagqabantshintshi malunga noku anokundinceda nceda? 🙁
Ndine-iPhone6 ​​kunye nohlaziyo kwi-iOS9.3, ingxaki endinayo kukuba andikwazi ukwenza iminxeba, okanye idatha, ngokungathi andinayo ibhalansi ... ekuphela kwendlela ekuku-Wi-Fi, ngubani onokundinceda? ?????
UAlex Lavall Martinez sitsho
Ndinengxaki nge-iOS9.3 kwi-iphone 6S, andazi ukuba ndim ndedwa na xa ndikhangela umntu endinonxibelelana naye kuSpotlight, ongandivumeli ukuba nditsalele umnxeba okanye ndithumele imiyalezo ngqo, kufuneka ndingene . Kwaye xa ndingena kolo nxibelelwano ngokubonakalayo, ayindithathi kwifayile yomfowunelwa obuzwayo, kodwa ngokulula ivula usetyenziso lwabafowunelwa.
Ngaba kwenzeka into efanayo nakomnye umntu?
Phendula kuAlex Lavall Martínez
Kwaye ukuba siqala ukucela ukubuyiselwa imali yemali yeselfowuni ngesiqinisekiso?
Ndizakunika umda wexesha (kancinci ngoku)! Ewe, ndicinga ukuba iinyanga ezintathu zanele, nditsho injineli elandela ityala lam, ivumile ukunditsalela umnxeba, kwaye ayikenzi, izolo ndamtsalela umnxeba kwaye umatshini wokuphendula uvuliwe, ndamshiyela inombolo yam kunye nenombolo yecala kwaye ndisalindile, sele bezibhalisile iimpazamo zomnxeba wam kabini, bendicinga ukuba xa iimpazamo ziba gabalala, izakukhawuleza, kwi ngokufutshane, siya kulinda kancinane kancinci
UOphelia Diaz sitsho
Phendula u-Ofelia Diaz
Ndikwazile ukuwavula eSafari… kwiWhatsApp nangeposi ayafana… ayatshayisa kwaye akukho ndlela !!
I-Apple igutyungelwe luzuko ngeli xesha. I-ipad yam khange iqonde ipassstore emva kokuhlaziya kunye nepro yam ye-macbook ayigqibanga uhlaziyo kwaye kuye kwafuneka ndenze ifomathi. I-fat shit evela kwi-Apple.
Umbuzo, ngaphezulu kokungaphumeleli, kuba i-Apple shit enkulu yaziwa ngabo bonke, kukuba, siza kwenziwa nini isisombululo? Xa uhlaziyo olutsha kunye nee-bugs zilungisiwe?
Ndiziphendula ngokwam kwaye ndiyathemba ukuba iyasebenza kuye wonke umntu .... .UHLOLO OLUSHA LULUNGILE! Ndabona nje. I9.3.1, njengoko kubonisiwe isombulula ingxaki …… masinqumle iminwe yethu kwaye sikhuphele !!
Phambi kokudibana naye bendincokola nenkonzo ye-technical technical Bandixelela ukuba uhlaziyo luphume kwimizuzu emi-5 edlulileyo. I-27'5 mb ngokusebenzisa iselfowuni kunye ne-1'88Gb ukuba uyenza nge-iTunes ... ngcono kakhulu i-iTunes kuba uhlaziyo olucocekileyo. Ndiyathemba ukuba ikuncedile.
Ndineveki ndinengxaki yokungakwazi ukuvula amakhonkco kwi-safari, ngoncedo ondinike lona ekugqibeleni lasonjululwa !!!
Ikhitshi likaMeyi sitsho
Ndizenzile zontathu ezi zinto kwaye zisebenzele mna. Ngoku ndiyakwazi ukuvula amakhonkco. Bendinengxaki ne iPhone qha. Akukho nto yenzekayo kum kwi-iPad. Enkosi kakhulu ngoncedo.
Phendula kwikhitshi likaMeyi
Ngokuhlwanje ndaye ndagqiba kwelokuba ndihlaziye u-9.3 emva koko ndenze u-9.3.1 kuba bendicinga ukuba ngekhe kube kubi kwaye ekubeni "ndihlupheke" kuphela iintsuku ezi-3 ngekhe kube kubi ukulinda ezinye iintsuku ezimbalwa. Isebenza kuyo yonke into. Ndiyathemba ukuba le yeyokugqibela, ayifani neziqwengana ezi-2 endizinikwe yi-apile
Yintoni ecacileyo ukuba xa sinesehlo, ukongeza ekufuneni intuthuzelo noncedo kwiindawo ezilungileyo ezinje, kufuneka sibize iApple kuba baneerekhodi zeziganeko yindlela "yokuhambisa" okwenyani.
Ngoku ndinokubhalisa kwibhlog.
Ewe, ewe, hlaziya kwaye iyasebenza, (okwangoku) uhambo olude lodwa luphelile, lweengxoxo ezinomsindo ngokufutshane, ndonwabile, kodwa kwangaxeshanye ndinomsindo kuba ngelixa ibingazange "ibe sisihlwele" Ngaphandle kokuhoya, kwaye xa sele injalo, bayisombulule ngokukhawuleza kangakanani, kwaye uxolo Pablo ngento osele uyazi. Konke okugqibelele
Sukuba nexhala 😉
Enkosi kakhulu, yonke into Kulungile, ndilandele amanyathelo akho kwaye yonke into ibilungile. NDANDIDELEKE. Enkosi kakhulu kwakhona.
isebenza kuphela eyokugqibela, kodwa igqibelele
Izolo ndibhale kule blog kwaye uluvo lwam alubonakali kwaye ke akukho mpendulo. Kwilizwe lam, eVenezuela, uhlaziyo lwe-9.3.1 aluvelanga kwaye. Ndifumene iingcebiso kule bhlog zindisebenzele. Andazi ukuba ndenzeni, ngaphezulu kweengxaki ezinzima esinazo, ukunxibelelana kakubi kwifowuni kuyenza nzima yonke into.
udanylson batista sitsho
sonia ,,, ukhe wazama ku »ujonge uhlaziyo»? awuveli wedwa ,, kufuneka ukhangele
Phendula u danylson batista
Ndihlaziye ukuya ku-9.3.1 kodwa amanye amaphepha akakasebenzi. Iphepha le-vueling umzekelo alisebenzi kwi-iPad Air okanye ngohlaziyo okanye ngezisombululo ozibeke apha, kwi-iPhone iyasebenza. Ikuvumela ukuba ukhangele imvelaphi, indawo oya kuyo, imihla ... Zonke ezantsi ziyasebenza kodwa xa uzinika ukuba zikhangele azenzi nto. Iya kumaphepha amaninzi kodwa andibakhumbuli.
Sele isonjululwe yiapile…. Uhlaziyo lwama-25 mb luyafumaneka, kusonjululwa iingxaki kuvulwa amakhonkco
Amanye amaphepha aqhubeka nokuphazamiseka emva kohlaziyo.
Ndikwi-ios 9.1 kwi-ipad mini 1 kwaye chrome ayizukuvula amakhonkco. Nokuba yi-safari.
Aba bantu shit ngakumbi nangakumbi !! Soze ndiphinde ndithenge iapile !!!
Molo, masibone ukuba umntu angandinceda… ndine-iPhone 5 edibanisa inethiwekhi ye-Wi-Fi kodwa ingakhangeli, iWhatsApp, i-safari, njl. Ayisebenzi. Kwenzeka kuphela nge-wifi endlwini yam, ndizamile ukuqala kwakhona i-router, ndibone zonke izifundo ukuba "zilungise iingxaki zokuhamba" kwaye akukho nto! nabani na onombono wokuba ndingayilungisa njani ingxaki? enkosi kakhulu kwangaphambili.
Uxolo bahlobo ndifuna ukwenza umbuzo, ukuba ungawusombulula nceda:
Xa ndingena kwiimephu, usetyenziso luyaboniswa kodwa alubonisi imifanekiso emephini, ezothutho okanye isethelayithi, indibonisa kuphela igridi yemephu kunye nayo yonke into ekhokelayo, enokuba iseli iphone 6 ine-ios 9.3.1 .XNUMX
Iimephu zikaGoogle ze-iOS zihlaziywa ngemowudi entsha yeenkonzo zokuhamba